किन रो’इन यति धेरै एक्कासी भाइरल कमला घिमिरेलाई के भयो ? (भिडियो) – Complete Nepali News Portal
किन रो’इन यति धेरै एक्कासी भाइरल कमला घिमिरेलाई के भयो ? (भिडियो)
गीतमा लय तथा शब्द डि.आर सुजनको रहेको छ भने राजु परियार, पुर्णकला बिसी, अमृत सापकोटा, सुनिता बुढा क्षेत्रीसँगै बालकलाकारहरु कमला घिमिरे, सचिन परियार र रबिना बसेलको स्वर रहेको छ । यस्तै गीतको भिडियोमा पनि १० जना कलाकारहरुको अभिनय देख्न सकिन्छ । सुरबिर पण्डित, रमा थपलिया, बेगम नेपाली, रियाशा दाहाल, दिवाकर भण्डारी, लेखान्त भुसाल, नविना सिलवाल, डि.आर सुजन, बसन्त वली र सुस्मिता पोखरेलको अभिनय रहेको छ । रेशम धर्नामीले खिचेको भिडियो बिकाश ज्ञवालीले सम्पादन गर्नुभएको हो भने निर्देशक डि.आर. सुजनकै रहेको छ ।